Browsh: Yemazuva ano zvinyorwa-zvakavakirwa pawebhu browser zvinotsigira mifananidzo uye vhidhiyo | Linux Vakapindwa muropa
Kana uchida webhu mabhurawuza eako terminalndiko kuti, zvichibva parugwaro, zvirokwazvo watoedza imwe nzira yazvo. Nezvimwe zvikonzero kana zvimwe, urwu rudzi rwebrowser runoshanda zvakanyanya kune vanhu vazhinji, semuenzaniso, kune avo vasina nzvimbo yedesktop yakaiswa pane avo masisitimu anoshanda. Nekudaro, iwe ungangoda imwe yeizvi mune zvimwe zviitiko nekuda kwechimwe chikonzero.
MuLxA uye isu tataura nezve akati wandei emabhurawuza aya, uye nhasi tinokupa iwe browsh kana iwe usina kumuziva. Uye haisi imwezve, nekuti iri rakanyanya kusarudzika browser inotsigira magirafu uye vhidhiyo, chimwe chinhu icho mamwe mabhurawuza akavakirwa pane echinyorwa interface asingatsigire. Asi kwete izvo chete, iyo Browsh browser inoonekwa seyazvino webhu bhurawuza nekuda kwehunhu hwayo, nekuti kunyangwe ichitaridzika sei kunge yechinyakare, inovanza zvimwe zvinoshamisa.
Kana isu tikawana hunyanzvi, ichokwadi kuti Browsh haisi webhurawuza, asi pane a kumberi-kumagumo yeiyo terminal inotsigira kutarisa nekubatana newebhu zvemukati kubva kune yedu yekuraira koni. Kutamba neichi chishandiso, uye nekushandura zvimwe zvemukati zvewebhu kuita ASCII hunyanzvi, iwe unozokwanisa kufamba zvakanyanya kudzora inodiwa network bandwidth sekubvumirwa kwayo nemugadziri wayo, uye izvo zvinoshanda zvakatsetseka kunyangwe pane isina simba kana yekare simbi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Browsh: yazvino zvinyorwa-zvakavakirwa pawebhu browser zvinotsigira mifananidzo nemavhidhiyo
Inonakidza, inofanirwa kufananidzwa ne «zvinongedzo»